ISIKHOKELO SOKUKHUPHELA IITWITCH VODS (2021) - ITHAMBILE
Isikhokelo sokukhuphela iiTwitch VODs
Ngaba uyafuna ukukhuphela iiTwitch VODs ukusasaza imidlalo yakho? Isikhokelo sethu esibanzi siza kubonisa ngokuchanekileyo ukuba ungazikhuphela njani iiTwitch VODs.
Yintoni iiTwitch VODs?
Ukudibanisa yinkonzo yokusasaza umdlalo eyilelwe abasebenzisi abanqwenela ukusasaza imiboniso yabo kwi-intanethi. Ngokwenza njalo, uninzi lwabadlali bebhola baye bakha uluhlu olubanzi lwabalandeli, kwaye phantse kufana nomthombo ofanelekileyo wengqesho. Ngeli qonga, abadlali beqonga banokusasaza imidlalo ngokukhawuleza ukuba bakhululwe. Banokusasaza imidlalo yangaphambili esele isafuneka.
Ukuphela kwempazamo yeTwitch kukuba liqonga lokusasaza ngqo kuphela. Ke, awukwazi ukufikelela kwiividiyo zayo, nje ukuba usasazo ngqo luphelile.
Ngokuzenzekelayo, bonke abasebenzisi banosasazo abalugcinileyo kangangeentsuku ezili-14; kanti, iTwitch Prime kunye nabasebenzisi beTurbo banokufikelela kwiividiyo zabo ezidlulileyo phantse iinyanga ezimbini. Nje ukuba ixesha elikhankanyiweyo liphelile, iifayile zokusasaza ziya kucinywa ngokuzenzekelayo.
Ke ngoko, ukukhuphela iTwitch VOD okanye iVidiyo-kwiDinga kuvumela abasebenzisi bayo ukuba bafikelele kwiifayile ezigciniweyo kwimilambo yeTwitch ebukhoma kwaye bayidlale ngaphandle kweintanethi okanye ngeYouTube.
Ungazikhuphela njani iiTwitch VODs
Indlela yoku-1: Khuphela iiVODs zakho zeTwitch
Indlela yesi-2: Khuphela iiVODs zeTwitch zabanye
Ukukhuphela ii-Twitch VODs kulula kakhulu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba ungaqala phi kwaye ngawaphi amanyathelo anokukwenza. Makhe sijonge iindlela ngeendlela onokuzisebenzisa:
Ukukhuphela iiTwitch VODs ezizezakho, into efunekayo kuqala kukuba kufuneka wenze iprofayili kwiTwitch kuqala. Unokuba ngumsebenzisi oqhelekileyo weTwitch, ubambiswano lweTwitch, okanye iqabane leTwitch ngokweemfuno zakho kunye neempawu ezinikezelwa kwiprofayili nganye.
Makhe sibone amanyathelo abandakanyekayo ukukhuphela ii-Twitch VODs ezazisasazwa ngaphambili nguwe:
vpn akukho ukufikelela kwi-intanethi windows 7
Yenza ugcino oluzenzekelayo:
1. Qalisa inkqubo ye- IWebhusayithi yeTwitch .
2. Cofa kwi Umqondiso weprofayile . Ukusuka kwimenyu eyehlayo phezulu, cofa ku Useto njengoko kubonisiwe ngezantsi.
Unxibelelwano lwendawo yengingqi alunalungiso lusebenzayo lwe-ip
3. Okulandelayo, khetha Isiteshi kunye neeVidiyo tab njengoko kubonisiwe.
4. Ngoku, yitshintshe Gcina usasazo oludlulileyo inketho ebekwe kwifayile ye- Useto lweVOD. Jonga umfanekiso onikiweyo.
Apha, lonke usasazo lwexesha elizayo luya kugcinwa ngokuzenzekelayo kwiprofayili yakho.
Funda kwakhona: Ungazikhuphela njani iividiyo zeYouTube kwiLaptop / PC
Ungazikhuphela njani iiVidiyo zeTwitch:
1. Jonga ku iphepha lasekhaya kwiakhawunti yakho yeTwitch.
2. Cofa indawo yakho icon yeprofayile. Khetha Umvelisi weVidiyo njengoko kubonisiwe apha ngezantsi.
3. Khetha ifayile ye Kaninzi ukhetho (luphawu olunamachaphaza amathathu) ecaleni kwe ividiyo ufuna ukugcina.
4. Cofa Khuphela nevidiyo yakho iya kugcinwa kwisixhobo sakho.
Nangona kunjalo, izicelo ezininzi ziyafumaneka ezithi zikhuphele iiTwitch VOD kodwa, Ukudibanisa uLeecher Sisicelo sasimahla esenza ukuba abasebenzisi baso bakhuphele iividiyo zeTwitch. I-Twitch ayikhuthazi okanye ayixhasi kuba lusetyenziso lomntu wesithathu. Iyafumaneka yeWindows 7, 8, kunye neenkqubo zokusebenza ezili-10.
Phawula: I-Windows PC yakho kufuneka ibe ne-NET Framework 4.5 okanye uhlobo oluphezulu olufakelwe ukuxhasa iTwitch Leecher.
Ezi zinto zilandelayo ziyenza ibe yintandokazi eshushu:
Ine-eyilwe kakuhle kwaye imbonakalo yomsebenzisi . Oku kwenza ukuba kungoyiki kangako xa kuthelekiswa neeapps ezifanayo ezisebenzela injongo enye.
Olona ncedo lukhulu ekunikezelayo, kukukwazi ukwenza njalo Khuphela iividiyo zeTwitch nawuphi na umsebenzisi kwinethiwekhi.
Lolu hlelo lokusebenza ihlaziywa rhoqo Ukuze uhlale usesikhathini kunye notshintsho olubalulekileyo kwiTwitch app.
Ukuba ufuna uncedo, ungaqhagamshelana nomyili weapp usebenzisa i inkonzo yenkxaso inikezelwe kwisicelo.
Makhe sibone ukuba sisisebenzisa njani esi sixhobo ukukhuphela iiTwitch VODs ezipapashwe ngabanye abasebenzisi:
1. Qhubela kwi Iphepha leTwitch Leecher kwiGitHub kwaye khuphela ukusuka apho.
2. Ngoku, ukubaleka ifayile yokufaka kwifolda ekhutshelweyo. Landela imiyalelo yokufaka.
3. Nje ukuba ufake, sungula ifayile Ukudibanisa uLeecher .
4. Khetha i Khangela ukhetho kwiphepha lasekhaya lewebhusayithi yeTwitch kwaye ufake ifayile ye igama yevidiyo ekhethiweyo.
5. Ngoku, cofa apha IiVidiyo ukhetho olufumaneka ngasekhohlo kukhetho lweNgxoxo.
6. Khetha Khuphela idilesi yekhonkco ngokunqakraza ekunene kule vidiyo ithi.
7. Buyela kwiTwitch Leecher iphepha lasekhaya kwaye utshintshele kwithebhu ephawulwe Ii-URL .
8. Cofa apha Khangela emva kokuncamathisela i ividiyo I-URL kwisithuba esimhlophe esinikiweyo.
windows 10 igcina ihlengahlengisa ii icon ze desktop
9. Ividiyo oyikhethileyo kwiTwitch kufuneka ivele. Cofa u Khuphela ukhetho oluboniswe emazantsi evidiyo.
10. Kwiskrini esilandelayo, khetha ifayile ye ubungakanani besisombululo sevidiyo kwaye i indawo kwikhompyuter yakho apho ividiyo ifuna ukugcinwa khona.
11. Ekugqibeleni, khetha Khuphela nje ukuba wenze onke amanyathelo.
12. Ividiyo yakho iya kufikeleleka kwindawo ekhethiweyo yefayile kungekudala.
Le yindlela onokuthi ukhuphele ngokulula imijelo yevidiyo okanye usasazwe ngabanye abasebenzisi.
Uyilungisa njani impazamo yomnatha ka-2000 kwiTwitch
I-9 yeeVenkile eziNgcono zeVidiyo yeVidiyo
Lungisa iiScroll ze-Intanethi eziKhulu ezingasunguli
Lungisa iAvast yokuVimba iLigi yamaNqaku
Siyathemba ukuba isikhokelo sethu sasiluncedo kwaye wakwazi khuphela iiTwitch VODs . Ukuba unamagqabaza / imibuzo, yiphose kwibhokisi yezimvo.
Kutheni uGoogle chrome eyeka ukusebenza
windows 10 incamathele kwiscreen sokwamkela emva kohlaziyo
windows 10 icima i-wifi ngokwayo
I-netflix ayilayishi kwikhompyuter
i-wifi icinywa rhoqo kwiifestile ezili-10